Ọrụ - shandong Gaoqiang New Material Technology Co., Ltd.
1. Biko kpọtụrụ onye na-ere ahịa. Anyị nwere ike inyere gị aka nke ọma:
2. Ọrụ ere tupu ere
Biko gwa anyị ngwa ahịa ịchọrọ ịzụta. Nwoke a na-ere ahịa ga-enye gị akụkọ nyocha ahụ site na foto akwụkwọ ma ọ bụ vidiyo. Testfọdụ ule nyocha sitere na china, ụfọdụ si mba ọzọ.
Anyị chịkọtara ụfọdụ data n'aka ndị ahịa m. Ọ bụrụ na ị nọ ezigbo nso, data ga-enwe nnukwu uru.
Mgbe ịtọchara iwu ahụ, onye ahịa ahụ ga-egosi gị usoro mmepụta yana lelee nnwale ahụ. Ma doputa otu nlele. Edebere nlele ahụ na ụbọchị, aha ngwaahịa, mba. O ga adiri anyi nma edebere maka otu afọ.
3. Mgbe erechara ya
1) N'ihi nke a bụ kemịkalụ ihe, oge ụfọdụ anyị enweghị ike idozi nsogbu ahụ n'ịntanetị. Anyị nwere ike ofufe gị ogbe osisi na-ekwurịta okwu na gị ẹkesikpede. Anyị nwere ọgaranya ahụmahụ na ihe admixture na ogbe osisi. Anyị nwere ike inyere gị aka ịchọta ụzọ dị elu na azụmaahịa a.
2) Njem njem: anyị na-akwụ ụgwọ
3) Anyị nwere atụmatụ ịbịakwute ndị ahịa ogologo oge na ụgwọ ọrụ ego amụma kwa afọ.
Hazie: anyị bụ ndị otu ndị mmadụ n'otu n'otu. Anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ maka otu ebumnuche.
Kee: onye ọ bụla nwere nkà pụrụ iche. Ha ka ha rụọ ọrụ ha.
Mụta: anyị dị njikere ịmụta ihe ka anyị wee nwee ike kwesịrị ekwesị.
Chọta: anyị dị njikere ịchọ talent isonyere anyị.
Na-agwa ibe gị okwu: anyị na-agba ume ka arụmụka dị n'etiti ndị ọrụ. A ga-ewere aro ọ bụla ga-enyere aka idozi nsogbu ndị ahụ ma melite ikike ọrụ nke otu.
Nlekọta: anyị ga-enye nkwado mgbe ndị ọrụ zutere nsogbu.
AKWECKWỌ ANY T
Shandong Gaoqiang New Materials Technology Co., Ltd. kpuchiri 9100 square mita maka mpaghara ụlọ na 600 square mita maka nyocha sayensị na ụlọ nyocha.
Anyị ụlọ ọrụ wuru a zuru ezu ihe admixture mmepụta akara, chemical analysis na nkịtị onwunwe laabu na Shandong University of Building na Beijing University nke obodo Engineering, onwem na oge a ngwá maka ji na-anwale nnukwu-ọnụ ọgụgụ ngwá na equipments. Companylọ ọrụ anyị nwere nyocha siri ike na mmepe nke nwere ndị dọkịta ọkachamara, ndị isi nke China Academy of Building Science.
The laabu ga ọnụ ọgụgụ na nyochaa ọhụrụ ngwaahịa 'ikike na irè site nwere na ndepụta maka 1 afọ. Ma a ga-ebule ihe nyocha tupu itinye ya n'ọrụ n'ihi ọdịiche nke simenti na aja. Dị ka anyị mgbe ire ọrụ, anyị ga-enye free on_site oru nkwado ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ihe ngwakọta: free
Oge: a ga-eziga sample n'ime ụbọchị 2 mgbe anyị natara ọnụego awara awara
Ọnụ ọgụgụ: 500g-2000g
Mkpọ: ọcha karama HDPE
Gwaputa: DHL ma obu FEDEX
Gwa ego: site n'aka onye zụrụ ahia
Iwu: mgbe onye zụrụ akwụkwọ na-ede akwụkwọ anyị, a ga-agụ ego a gosipụtara nke ọma dị ka akụkụ nke uru ahụ.
1. anabatanụ gaa na ụlọ ọrụ m
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa m biko bịa china ma gaa na ụlọ ọrụ m. Anyị ga-egosi gị usoro imepụta ma mee nnwale ịchọrọ ịhụ. biko buru ụfọdụ ihe atụ mgbe ị lọtara jiri simenti na aja gị were mee ule.
Nkwari akụ: anyị na-akwado gị ụlọ nkwari akụ ahụ.
Efu njem:njem a ga-agụta dị ka akụkụ nke ngwongwo mgbe ị na-ede akwụkwọ anyị. anyị nwere okwukwe na ngwaahịa m n'ihi na anyị mere ọtụtụ atụnyere ọtụtụ n'ime ha n'ụwa.
2. Anyị ga-eleta ụlọ ọrụ gị
N'ihi nke a bụ kemịkalụ ihe, oge ụfọdụ anyị enweghị ike idozi nsogbu ahụ n'ịntanetị. Anyị nwere ike ofufe gị ogbe osisi na-ekwurịta okwu na gị ẹkesikpede. Anyị nwere ọgaranya ahụmahụ na ihe admixture na ogbe osisi. Anyị nwere ike inyere gị aka ịchọta ụzọ dị elu na azụmaahịa a.
Ọnụ njem: anyị na-akwụ ụgwọ mgbe ị na-ede akwụkwọ anyị.
3.We nwere atụmatụ ndị ahịa maka ndị ahịa ogologo oge na amụma ụgwọ ọrụ kwa afọ.
1.liquid ụdị polycarboxylate superplasticizer
1) IBC tank 1000kg ka 1200kg nke ọ bụla, 1 × 20 'akpa nwere ike were 20 pc IBC tank, Label nwere ike ịbụ dịka arịrịọ
2) flexi tank: 20000kg ka 24000kg ọ bụla, 1 × 20 'akpa nwere ike buru 1 pc flexi tank, Lable nwere ike ịbụ dị ka arịrịọ
2 ruo ụbọchị 5 mgbe enwetara ego ahụ
Mentkwụ termsgwọ okwu:
1. TT 30% nkwụnye ego, na 70% nguzozi hụrụ oyiri nke BL
2. Na-apụghị ịgbanwe agbanwe LC na anya